Ọnọdụ ihu igwe na ọnọdụ akụ na ụba ugbu a maka mgbake njem nlegharị anya Green
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Ọnọdụ ihu igwe na ọnọdụ akụ na ụba ugbu a maka mgbake njem nlegharị anya Green
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Ịrụ ọrụ • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism
Mkparịta ụka mkpagharị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke Seychelles
Ndị ọchụnta ego si n'ofe mpaghara ndị njem na ndị otu obodo gbakọtara na Eden Bleu Hotel maka Green Recovery of Symposium na Tọzdee, Septemba 23, iji gosipụta ọnọdụ ihu igwe na mkpa akụ na ụba nke mgbake akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Enwere atụmatụ nkwado na -eme n'etiti Ngalaba njem nlegharị anya nke Seychelles, Ministry of Agriculture, Change Climate and Environment (MACCE), na British High Commission.
Okwu mkparita ụka na -ekwu maka ọghọm ndị njem na -abawanye na mmetụta mgbanwe mgbanwe ihu igwe.
Site na ịdabere na njem nlegharị anya, okwu ndị a na -anọchite anya nnukwu akụ na ụba.
Atumatu mmekorita a n'etiti ngalaba njem nlegharị anya nke Seychelles, Ministry of Agriculture, Change Climate and Environment (MACCE), na British High Commission, matara na mmụba na -eme njem nlegharị anya na mmetụta mgbanwe ihu igwe. Okwu mkparita ụka ahụ gosikwara na ọ nwere ike ime ka mpaghara ahụ nwee atụmanya ogologo oge nke mbelata njem ogologo oge site na ndị njem zuru ụwa ọnụ, n'ihi nchegbu na-arị elu nke mmetụta carbon nke ụgbọ elu. N'inwe nnukwu ntụkwasị obi na njem, okwu ndị a na -anọchite anya nnukwu akụ na ụba obodo.
Ndị ọchụnta ego sitere na ụlọ ọrụ nkeonwe na nke ọha kesara ngwa ndị dị adị na omume kacha mma dị ugbu a na -enye aka na mmegharị ihu igwe na mbọ mbelata n'ime ụlọ ọrụ ndị njem, iji kpalie azụmaahịa ndị njem ka ha tinye aka na mmepe na -adigide ma na -akwado mbọ nchekwa. Ndị a gụnyere akara asambodo na-adigide a ma ama, mkpofu dị nkọ na nke dị mkpa, mmiri na sistemụ njikwa ike ejiri na ụlọ ọrụ, na-atụgharị usoro sitere na okike na ụlọ ọrụ ndị sitere n'okike, yana ijikọ nchekwa na digitization na mmepe ahịa.
N'okwu ya n'okwu mkparitaụka ahụ, Minista Radegonde kwuru na ihe ndị mere n'ime afọ abụọ gara aga egosila anyị ka ụwa si na -agbanwe n'ike n'ike na etu njem nlegharị anya si emetụta ihe mpụga, ọkachasị na obere agwaetiti.
“Anyị na -ahụkwa ịrị elu nke onye njem maara ihe na gburugburu ebe obibi, onye na -atụ anya ebe njem ga -enye nhọrọ njem nlegharị anya ga -adigide. Dịka ọmụmaatụ, nyocha na -egosi na ọnụ ọgụgụ na -arịwanye elu nke ndị mmadụ na -eme atụmatụ iji ụgbọ elu na -erugharị maka ezumike ha iji belata ikuku ikuku CO2 na akara ukwu carbon ha. Na mgbakwunye, ndị na-akwado ihu igwe, amalitela mkpọsa "ụgbọ elu na-eme mkpọtụ" gburugburu ụwa, ọkachasị na Europe, na-akụda ụgbọ elu ogologo oge. Mmegharị ndị a yiri ka ha na -enweta mmetuta. Ha anaghị agba ama nke ọma maka ụlọ ọrụ njem anyị. Anyị na-ahụ onwe anyị n'okporo ụzọ ebe anyị ga-eji amamihe họrọ maka ọdịnihu ga-adigide yana, ọkachasị, maka usoro sitere n'okike nke bụ ihe kacha mkpa na COP 26, "Minista Radegonde kwuru.
Usoro isiokwu a mekwara ka ohere gbasakwuo ìhè Seychelles'Ntughari Ntinye Mba Nyere (NDCs) - na -elekwasị anya na nkwa njem obodo - iji mee ka ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya hụ mkpa mpaghara dị mkpa iji nweta ebumnuche ndị a n'ime afọ ise na iri na -abịanụ.
Mkparịta ụka panel nke isiokwu nke “Iweghachite akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ; Ihe Mgbaru Ọsọ, Ohere na Mkpa ”mekwara n'ehihie. Ndị nnọchite anya mkparịtaụka gbasara ohere ọrụ na ohere achụmnta ego nke mgbake njem nlegharị anya nwere ike iwetara obodo; mkpa maka mgbake nke gụnyere itinye uche na mkpa na ịma aka ndị niile metụtara njem; otu mgbake akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ si atụnye ụtụ na Seychelles 'Blue Economy, yana ka njem nlegharị anya sitere n'okike nwere ike isi nweta ego maka mmemme nchekwa ogologo oge n'oge ọgba aghara na ụlọ ọrụ njem, dị ka ngosipụta na-aga n'ihu nke ọrịa COVID-19 zuru ụwa ọnụ.
Ndị sonyere tụgharịkwara uche na mkpa achọrọ iji nweta Green Recovery of Tourism - na mmegharị ihu igwe na mbenata mbelata - dịka akụkụ nke imepụta akwụkwọ nsonaazụ. Akwụkwọ a dị nkenke ga -egosipụta ebumnuche nke mkparịta ụka a, ma chịkọta mkparịta ụka na ntụgharị echiche emere n'oge ihe omume ahụ. Akwụkwọ ahụ nwekwara nkwa dị mkpirikpi nke dabere na NDC na njem nlegharị anya-nke a ga-eji bụrụ ntụaka maka ntụgharị uche n'ọdịnihu-nke a ga-akpọ ndị sonyere ka ha bịanye aka.
Ọ dị mkpa, enwere ọtụtụ nkwekọrịta n'etiti ndị sonyere na Seychelles nwere ọnọdụ dị mma maka ime mgbanwe maka omume ndị ahịa na njem mba ofesi wee bụrụ onye ndu ụwa na njem nlegharị anya na -adigide - na -agbagha karịa ebe ọ bụla ọzọ. Njem nlegharị anya Green Green na Seychelles, dị ka nnọkọ a siri kwuo, ga -atụgharị nnukwu ihe egwu akụ na ụba, ka ọ bụrụ ohere akụ na ụba ogologo oge.